कोरोनाको पहिलो औषधि बनेको दाबी , भोली सार्वजनिक हुँदै, परिक्षण समेत भईसक्यो ! - Dainik Online Dainik Online
कोरोनाको पहिलो औषधि बनेको दाबी , भोली सार्वजनिक हुँदै, परिक्षण समेत भईसक्यो !
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७७, मंगलबार १२ : ३७
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको उपचार गर्न अनगिन्ती प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसै बीच बाबा रामदेवको संस्था पतंजलिले भोलि कोरोनाको पहिलो आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिल सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।